Amakhambi omphakathi wemivimbo ye-varicose emilenzeni. Ukupheka kwabantu, amathiphu namasu
I-varicose veins ithinta kuqala kuwo wonke ama-rectum nemilenze, ngenxa yobuthakathaka bezincubu ezixhunyiwe, ubunzima bokuphuma kanye namandla anganele amagesi. Lesi sifo senza umsebenzi onzima ohambisana nokuhamba nokuphakamisa izisindo, futhi futhi uhlala ezinyaweni isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, ukubonakala nokuthuthukiswa kwalesi sifo kuhlotshaniswa nokuqothulwa njalo. Kwezinye izimo, lesi sifo sibonakala ekukhulelweni, lapho isisu esinzima sinyusa imithanjeni emgodleni omncane. Kulesi sihloko sizokhuluma ngezindlela zokwelapha zemivimbo ye-varicose emilenzeni. Kodwa ngaphambi kwalokho, ake sithole ukuthi iziphi izimpawu zalesi sifo. Ngakho-ke, ake siqale.
Izimpawu zemilenze yemilenze
Kulesi sifo, imifino ilahlekelwa ukuqina kwayo, ilula futhi ikhule ezindaweni ezihlukene, ukwakha "ama-nodes". Kulezi zindawo ezikhulisiwe, i-blood flow velocity isinciphisa, okubangela ekuthuthukiseni i-thrombosis. Izindwangu zishintsha ukuma futhi zanda. Kwezinye izindawo zishintsha ngaphansi kwesikhumba, kanti kwezinye zivuvukala, zakha "amafindo". Izimpawu zemilenze ye-varicose zibonakaliswa ngendlela yokukhathala nokuvuvukala kusihlwa. Futhi esikhumbeni semikhawulo engezansi kubonakala izindawo eziluhlaza okwesibhakabhaka, ezinsundu futhi ezibomvu.
Kubalulekile ukuqonda ngokucacile ukuthi ukwelashwa kuzophumelela kakhulu ezinyathelweni zokuqala zesifo. Uma konke kuqala, ukungenelela okuphela kuphela kungasiza. Ngakho-ke, kuyadingeka ukuqapha ngokucophelela impilo yakho futhi uthathe isinyathelo masinyane ngezimpawu zokuqala. Futhi sikusize kulezi zindlela zokwelapha zemivimbo ye-varicose emilenzeni yakho.
Ivuselela ngokuphelele inqubo yokusakaza. Futhi le nithi isusa ukuvuvukala kwemithanjeni. Lungiselela umuthi okuvela kuwo kanje: ama-nut wonke agajwe ku-grinder yekhofi noma agayiwe kwi-grater. Khona-ke, ingxenye eyodwa kwezintathu zesipuni esiphezulu se-powder etholakala ithululelwa ngamanzi abilayo futhi ivunyelwe ukupholisa ekamelweni lokushisa. Bese ungeza i-spoonful of honey bese uqhubeka imizuzu engu-20. Umhluzi obangelwayo udakiwe ekuseni ngaphambi kokudla kwasekuseni. Kubaluleke kakhulu ukulungisa umthamo omusha we-powder nsuku zonke. Emva kwakho konke, amafutha abalulekile aphela ngokushesha, futhi isiphuzo sishiya izindawo zayo zokuphulukisa.
Amafutha emithanjeni ye-varicose
Usizo oluhle ngalesi sifo. Amafutha emithanjeni ye-varicose ilungiswa ngesisekelo samafutha emifino. Kodwa ngokuvamile usebenzise umnqumo, njengoba uqukethe i- arachidonic acid. Ukuze unike ukubunjwa kwabantu, kubalulekile ukuxuba amafutha ezilwane ezincibilikile. Futhi ekwenzeni inqubo yokukhiqiza kunconywa ukusebenzisa izitshalo ezinjalo:
Inhlanganisela enjalo kulula ukuyilungisa. Isibonelo, amafutha avela kuma- chestnut amahhashi enza kanje: 6 Izithelo ezomile zifakwa zibe ufulawa, engeza 300 milligrams ibhotela kanye nezipuni ezimbili zezimbali ze-chestnut ezichotshoziwe. Ingxube eholayo ifudumele emanzini okugeza ngamaminithi angama-60. Khona-ke yimani, susa isikhashana, engeza amafutha ezilwane nokuxuba. Lokho, eqinisweni, konke, kungasebenzisa ngokushesha amafutha atholakalayo nge-varicose veins.
Ukwelashwa akuyona yonke, kodwa utamatisi kuphela aluhlaza. Indlela yokuphatha imivimbo ye-varicose kuleli cala? Kulula. Utamatisi kufanele uthathwe ngesigamu bese ubeka enye yezinxenye zenyama emvini, aze aqale ukushisa. Khona-ke utamatisi uhlanzwa futhi indawo iyahlanzwa ngamanzi abandayo. Emva kwalokho, ingxenye yesibili isetshenziswa emlenzeni. Futhi kubalulekile ukuthi wenze izikhathi ezine. Emasontweni amathathu uzobona i-blanching yama-node ama-venous.
Ngisho nasezikhathini zasendulo odokotela baphatha imithi ye-varicose ngesikhathi sokukhulelwa ezinyaweni zabo ngamaqabunga eklabishi. Bese behluleka ukuchaza izizathu zokuphumelela kwalolu cube. Manje sekujwayelekile ukuthi amaqabunga aklabishi aqukethe ama-microelements amaningi namavithamini. Futhi zisetshenziselwa ukucindezela ukwelashwa kwemivimbo ye-varicose.
Lokhu kwenziwa kanje: iqabunga leklabishi lilwa noma liphuma ngen pin. Khona-ke enye yezinhlangothi zayo igcwele amafutha yemifino bese isetshenziselwa endaweni ethintekile. Lungisa ishidi nge-bandage ngosuku olulodwa. Ngakusasa yonke inqubo iphindaphindiwe. Inkambo jikelele yokwelapha inyanga.
Lesi sitshalo singokwesigaba "kusho imivimbo ye-varicose emilenzeni yokusetshenziswa kwangaphandle nangaphakathi." Esikhathini sokuqala, i-compress yenziwa, futhi esimweni sesibili, itiye.
I-compress yenziwa kanje: impande ye-ginger imhlabathi, ixubene nobusi futhi isetshenziselwa indawo yenkinga yamahora angu-3-4. Ukuze uthuthukise umphumela, kufanelekile ukumboza izinyawo zakho ngengubo efudumele.
I-tea kusuka ku-ginger akuyona nje indlela yokuvimbela imivimbo ye-varicose, kodwa futhi indlela yokwelapha lesi sifo nganoma isiphi isigaba. Lungiselela kalula: udinga ukusika ucezu oluncane lwempande, uthele amanzi abilayo bese uma ume imizuzu engaba ngu-15. Kumele uqaphele ukuthi ukusetshenziselwa kwalesi sihloko njalo kuvamile ukuhambisa ukujikeleza kwegazi, kodwa futhi kuyoba nethonya elizuzayo kumetabolism. Ngakho-ke, lesi siphuzo kubalulekile ukuphuza kubantu abakhuluphele kakhulu.
Lezi azizona izidakamizwa ezithandwayo kakhulu zomuthi we-varicose emilenzeni. Noma kunjalo, ziyasebenza ngempela. Into eyinhloko yazo zonke izifo ezingenayo i-vodka. Ngakho-ke, uma kukhona ukulimala esikhunjeni semilenze, kuyafaneleka ukuzama enye indlela yokwelapha.
Okuphumelela kakhulu yi-tincture evela ku-Kalanchoe. Ngezinye izikhathi yengezwa umquba omhlophe noma omhlophe. Umuthi ulungiselelwe ngalendlela elandelayo: amaqabunga e-Kalanchoe afakwe kahle futhi afakwe embizeni. Bese uthele i-vodka bese uvikela amasonto amabili endaweni emnyama. Ukumnika okwenziwe ngomumo kugxiliwe ezindaweni eziyinkinga yemilenze kabili ngosuku ngezinyanga ezintathu.
Apple cider uviniga kusuka varicose emilenzeni
Okwamanje, lokhu kungenye yezokwelapha ezithandwa kakhulu futhi ezinhle kunazo zonke zalesi sifo. Iphuzu eliphelele ukuthi ukubunjwa kwe-apula cider uviniga kuhlanganisa ama-microelements angaphezu kuka-20 namaminerali okudingekayo ukuze kube nemikhumbi. Futhi, yiqiniso, amavithamini C, B no-A.
Ukusebenzisa njalo lo mkhiqizo kwenza kube lula ukufeza:
Ukuthuthukisa ukujikeleza kwegazi;
Ukuphakamisa ithoni yesikhumba;
Ukuqinisa izindonga zemithanjeni.
Kodwa i-apula cider uviniga kusuka ku-varicose emilenzeni iyosiza kuphela uma usebenzisa umkhiqizo wemvelo, owenziwe ujusi osanda kufakwa. Abanye abakhiqizi abangenangqondo bayakwenza kusuka ebaleni. Akukho ukusetshenziswa kwaviniga enjalo.
Ihlobo luni lamafutha aphathwa nge-veicic veins?
Kanye namafutha okugcoba, ama-tinctures kanye noviniga, amafutha abalulekile asetshenziswe ngokuqinile. Ngokuvamile kaningi i-castor, i-linseed, i-caraway, i-garlic, i-sandalwood nabanye. Ngakho-ke, yini okufanele uyenze ngomlenze we-varicose uma unamafutha ashiwo ngenhla? Kunezinketho ezimbili:
Amaconsi ambalwa afakwa ebhodini lokufudumala. Thatha nsuku zonke kusihlwa.
Futhi amaconsi ambalwa afakwe ekhilimu (amafutha), lapho enza massage nge-varicose izinyawo. Ukuvumelana okuhambisanayo kugxilwa ngokunyakaza okuncane ezindaweni ezithintekayo.
Ukusetshenziswa kwamafutha angenhla akuqinisekisi nje kuphela izindonga zemikhumbi, kodwa futhi kususa ukuvuvukala kwemilenze.
Uju, i-bee impova, i-propolis ne-alitherapy
Lezi zimali ezivela emithanjeni yama-varicose ezinyaweni zinomlando omude. Uma ungena ekubunjweni kwawo, khona-ke inzuzo enkulu izobonakala ngokushesha. Kodwa hhayi yonke imikhiqizo ehlongozwayo iyatholakala kubahlali be-metropolis.
Okungafani noju. Ingathengwa kunoma isiphi isitolo. Bangayiphatha kanjani imivimbo ye-varicose? Esikhathini sendwangu isetshenziswa ungqimba omncane wobusi futhi usetshenziswa emithanjeni evuthayo. Ngenhla, isilonda sinefilimu ye-polyethylene ne-bandage. Ezinsukwini ezintathu zokuqala, i-compress isetshenziselwa amahora amabili, amathathu namahora amane, ngokulandelana. Bese kusele ubusuku bonke. Inkambo yokwelapha ivela emavikini amabili kuya kwamathathu.
Uma ungazi ukuthi ungayiphatha kanjani imithi yamagciwane e-varicose, khona-ke sineluleka ukuthi uzame le berry. Njenge-ginger, isetshenziselwa ukwenza isiphuzo esinamandla noma ukucindezela.
Esikhathini sokuqala, ijusi le-viburnum lixubene noju (0.5 amalitha ejusi - amathisipuni amabili uju). Phuza izikhathi ezine ngosuku (amabili wezipuni). Inkambo yokwelashwa yinyanga eyi-1.5.
Ukwenza i-compress, amajikijolo avulekile embusweni we-gruel, awubeke emgodini awubeke endaweni evuvukile, awugqoke nge-bandage. Le ngcindezi ingcono kakhulu ishiywe ubusuku bonke.
Ithanga ngumkhiqizo owusizo kakhulu oqukethe amakhidiyutrienti amaningi namavithamini. Ukuze ukwelashwa kwemivimbo ye-varicose, kubalulekile ukusebenzisa inyama yangaphakathi, ngemuva kokuyikhulula kumbewu. Le "mithi" igubha umlenze ngezinkinga ze-veins, bese isongwe ngendwangu efudumele bese ishiya ubusuku. I-pulp esele igcinwa esiqandisini. Umphumela wokwelashwa ngeke uvele ngokushesha, ngakho kuyafaneleka ukubekezela.
Ukuze kuqondile, akusiyo isithelo ngokwayo esetshenziselwa ukwelashwa kwe-varicose, kodwa amafutha ashicilelwe kuwo. Ilungiselelwe ngalendlela elandelayo: uhlaka lwe-lacquer elingu-1.5 cm lugqoke emgodini weglasi. Ngaphezulu kwayo izigaxa zisika izithelo ze-clover. Ubungqimba kufanele bube ngu-1 cm. Khona-ke umsizi uyahamba futhi njalo njalonjalo kuze kufike amathini. Kubalulekile ukuthi ungqimba wokugcina wamafutha egobe. Ngemuva kwalokhu, ibhodlela lifakwa kuhhavini noma ukugeza kwe-steam ngomlilo ophansi futhi ufinyelele emahoreni angu-24. Amafutha aphethwe aphehliwe futhi agxilwe ezindaweni eziyinkinga ngezikhathi ezimbalwa ngosuku.
Labo abakwazi ukuphatha imithi ye-varicose yabesifazane sekuyisikhathi eside besebenzisa lesi sithelo esimangalisayo. Isetshenziswa kokubili ngaphandle, ngendlela yokucindezela, kanye ne-inward. I-compress ilungiswa kanje: ilamula ehlanziwe yahlukaniswa ibe yimijikelezo futhi isetshenziselwa imithanjeni evuthayo, ilungisa nge-bandage. It sigqoke lonke usuku. Kulesi simo, imibuthano ye-lemon ishintshwe ibe yintsha izikhathi ezingu-2-3.
Ijusi le-lemon lihlanza izitsha futhi likhulise ukuqina kwazo. Ngakho-ke, lokhu kulamula okumele kuhlanganiswe kufanele kufakwe ekudleni kwalabo abanezinkinga nge-veins, noma labo abafisa ukuvimbela okwenzekayo.
Nansi umuthi wendabuko ongcono kakhulu wemivimbo ye-varicose: kusuka kuma- lemons ayisithupha ufaka ijusi bese uwaxuba nge-glassware enezibuko ezimbili zobusi, amashidi amathathu omlomo wegolide kanye nama-clove amahlanu we-garlic oqoshiwe. Ingxube elandelayo kufanele ifakwe endaweni emnyama izinsuku eziyisikhombisa. Phuza imithi yezipuni ezine ezine ngosuku. Inkambo yokwelapha inyanga.
Lemifino isetshenziselwa imivimbo ye-varicose ngendlela yokucindezeleka.
Izilimo eziyizigaxa ezimbalwa ezihlutshiwe ziphezu kwesigcawu futhi zingaphezu kwendawo eyodwa ethintekile. Konke lokhu kuhlanganiswe phezulu kwezingqimba eziyisishiyagalombili ze-gauze, ezifakwe emanzini amazambane. Le compress isetshenziswa amahora amane. Kubaluleke kakhulu ukusebenzisa izilimo eziyizigaxa ezintsha kuphela.
Kuzo zonke izinhlobo ezikhona zobumba, okwesibhakabhaka kuyilungele ukwelashwa kwemivimbo ye-varicose. Ochwepheshe abaningi baqinisekisa ukuphumelela okuphezulu komthelela walo emithanjeni ethintekile. Nge-veicic veins, ubumba lisetshenziswe ngendlela ye-appliqués.
Ukufeza inqubo, ubumba buhlanjululwa ngamanzi endaweni ewuhlaza. Ukuvumelana okuhambisanayo kusetshenziselwa izindawo zenkinga ngohlaka lwamasentimitha amabili, zimbozwe ithawula futhi zigcinwe okungenani amahora amabili. Khona-ke ubumba luhlanzwa. Inkambo yokwelashwa - izinyanga eziyi-1,5 zokusetshenziswa kwansuku zonke.
Ezimweni eziningi, kuthathwa ngaphakathi ukuze kuncishiswe isisindo futhi kusetshenziselwe ukuguqula umzimba. Kuyaziwa ukuthi ukunciphisa umzimba nokunciphisa ngokweqile yizimbangela eziyinhloko ze-varicose veins. Kodwa amafutha wezinhlanzi anesinye ukusetshenziswa.
Ixubaniswe noMeyi uju ngokumisa okulinganayo ngo-1: 1 isilinganiso. Amafutha aphethwe asetshenziselwa indwangu yelineni futhi isetshenziswe emithanjeni evuthayo ubusuku bonke.
Manje uyakwazi ukwelapha imivimbo ye-varicose ekhaya. Abantu abaningi abaqapheli ubuhlungu emaphethelweni aphansi, ukuvuvukala nokukhathala ekupheleni kosuku, bebheka izinto ezijwayelekile. Ungabi njengabo. Ukungazinaki izimpawu zesifo, awukwazi ukukuqeda. Ngakho-ke, ngezibonakaliso zokuqala, sebenzisa izixazululo zomuntu ngezivilini ze-varicose emilenzeni, ezibalwe kulesi sihloko. Uma kungekho mphumela, xhumana no-phlebologist ofanelekayo.
Abantu abakhulu "abangaziwa": herbalist monastic
Indlela yokwandisa isibalo segazi elimhlophe
Izidakamizwa "Holesenol artichoke"
Statin - kuyini? Statin (izidakamizwa): igama
Ukulungiselela chakhokhbili izinkukhu multivarka
Ikhekhe nge cocoa zokupheka. Layer ikhekhe nge cocoa
Yini ukudla kwasekuseni "McDonald"?
Izembatho ze onodoli Monster High ngezandla zakhe (iphethini)
Umthamo flash inkumbulo ulwazi
Amafutha Imidwebo. abaculi Contemporary: landscape imidwebo